September 2021 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNksz uCelukwazi Khumalo, umsunguli we-Aries Beauty, inkampani yezobuhle yaseMtubatuba, KwaZulu-Natali
UQALE ukuziphophotha ubuso enzela ukuba muhle nje kuphela, engazi ukuthi kungagcina kuyinto engamenzela imali. Kuthe ngokunconywa kwesandla sakhe wagcina enqume ukukwenza ibhizinisi.
UMnu uZolani Matebese, umsunguli weSendoff Funeral App
UBUNZIMA abhekana nabo ngenkathi enza amalungisello omngcwabo wakubo ngonyaka odlule kumenze wacabanga indlela angenza izinto zibe lula ngayo kwabanye abasemanzini.
NGAPHEZU kwakho konke okunye, abamabhizinisi manje sekufanele bakhathazeke ngokuthi kungenzeka kunciphe isivinini okudonswa ngaso umoya wokuxhumana ngeselula.
NAMHLANJE ngithanda sibheke isihlava esisabalele kithina bantu abamnyama sokuba novalo entanyeni. Emasontweni edlule sike sabheka indaba yokuthi kubaluleke kanjani ukuthi sisebenze ngokubambisana singabantu abamnyama.
UNksz uNomonde Ncongwane, umsunguli we-Agricultural Processing Solutions
Waqala ukuzwa ubizo lokuba ngumlimi esemncane. Lumlandele ngisho esethi uyaluziba. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
ESAKHULA kwakuthi uma kuvalwe izikole kubon baye epulazini likayisemkhulu owayemfundisa ukusenga nokulusa izinkomo, nokulapho lwaqala khona uthando lwakhe lwezolimo.
UNkk UBongi Ngoma, inhloko yeNational Audit eHhovisi lomCwaningimabhuku-Jikelele eNingizimu Afrika
IZINKINGA ezinqala ezikhungethe iNingizimu Afrika, okuwububha, ukuntuleka kwemisebenzi nokungalingani, zingaxazululeka kalula uma wonke umuntu engazibophezela ekwenzeni umehluko lapho ekhona.
IBHANGE loMbuso iSouth African Reserve Bank linqume ukungayiguquli imbalimboleko ku-3.5%. Lithe lesi kube yisinqumo esiwu-elethu.
Kuntwela ezansi ngenkinga yokushoda kukagesi eNingizimu Afrika
Izithombe: wuGoogle, wuFacebook neSithunyelwe
Kunenhlasi yethemba ngenkinga yokushoda kukagesi ezweni. USLINDILE KHANYILE uyabika
SEKUPHINDE kwengezwa emizamweni yokuxazulula inkinga yokushoda kukagesi eNingizimu Afrika. Kuleli sonto inhlangano eyengamele ugesi iNational Energy Regulator of South Africa (iNERSA) iphasise amalayisensi ezinkampani eziyisikhombisa ezizoba ngabaphehli bakagesi abazimele.
UMnu uSiyabonga Khumalo, umsunguli we-Isinamuva Holdings, abanikazi be-Isinamuva Properties, Isinamuva Entertainment ne-Isinamuva Manufacturing
UKHULE ephupha ngempilo ewubukhazikhazi ayeyibona kuthelevishini nasemabhukwini ayewafunda komunye womakhelwane bakubo ngoba wayefisa ukushintsha isimo sakubo. Nakuba babemhleka uma exoxa ngaleli phupho kodwa ukubambelela kulo kugcine kumenze usomabhizinisi.
UMnu uMenzi Mtshali, umsunguli weMenzi’s Perfumes yaseSikhawini, KwaZulu-Natali
UBUGCOKAMA nokuchazwa wukuthaphuka kamnandi kuholele ekutheni ibhungu eliyiqhathanzipho lisungule inkampani ekhiqiza, idayise iziqholo.
Kumele sibuyekezwe masinyane isinqumo se-UK ngoba siyayilimaza iNingizimu Afrika, kuloba uBusi Mavuso
SINGIDUMAZILE isimemezelo esenziwe ngabaphathi base-UK ngoLwesihlanu; sokuthi iNingizimu Afrika izoqhubeka ibe sohlwini olubizwa nge-“red list”. Lesi sinqumo asiyilungele intuthuko yaseNingizimu Afrika futhi simbi uma ubheka ubudlelwano bezomnotho noma bokuhwebelana phakathi kwala mazwe womabili.
NAMHLANJE ngithanda sibuke lolu suku olusanda kudlula lokugubha ukuzisebenza, phecelezi i-entrepreneurship, umhlaba wonke. Libaluleke ngani leli langa na?
UNksz uNompumelelo Makhubu noNksz uNombuso Mkhize, abasunguli beWood Fired Pizza yaseChesterville, eThekwini, KwaZulu-Natali
UBUNGANI bezintokazi ezimbili zaseChesterville, eThekwini, abugcinanga ngemidlalo yaselokishini kodwa bugcine ngebhizinisi elenza, lidayise i-pizza eyenziwa ngezithako ezintsha nangomlilo wezinkuni.
UNGATHI bekuyizolo loku sethula iziko lezindaba zamabhizinisi ezinkundleni zokuxhumana ezibhalwa ngesiZulu. Izolo, mhla ka-16 kuSepthemba, besigubha unyaka Umbele wasungulwa. Umbele awethulwa kunzima eNingizimu Afrika nasemhlabeni jikelele. Wethulwa amabhizinisi ewa ubuthaphuthaphu … Read More
UMnu uGiven Ngwamba, umnikazi weNdzilo Charcoal Briquettes yaseNaas, eMpumalanga
EMVA kweminyaka ihlwaya umsebenzi wokuba unjiniyela womsindo kepha kunhlanga zimuka nomoya, umqondo webhizinisi wagcina uyifikele ishisa inyama insizwa yaseNaas, eMpumalanga.
Asingawudedeli umgqigqo wokubuyisa ithemba kosomabhizinisi abalahlekelwe ngenxa yezibhelu, kuloba uBusi Mavuso
NGESONTO umengameli wezwe uMnu uCyril Ramaphosa wenze kahle ngokucacisa ukuthi ukugomela (iCOVID-19) kubalulekile. Mancane amathuba okuthi abantu abagomile baphathwe yilesi sifo. Lena yiyona ndlela yokubuyisela umnotho ekutheni usebenze ngokupheleleyo nokuthi sithole inkululeko yokuphindela empilweni ejwayelekile.
Silubheke ngabomvu nathi kuleli zwe uhlelo lukaFacebook lokutakula amabhizinisi asafufusa, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngifisa sibheke uhlelo olusha oluhle lokusiza amabhizinisi amancane nantulayo olwethulwe wuFacebook.
UMnu uLindokuhle Dlezi, umnikazi weWorthy Land and Farming yasePort Shepstone, KwaZulu-Natali
Ubone intuba yokuziphilisa, wagxuma wahlala kwezolimo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UCWANINGO alwenzile lumenze wabona ukuthi bancane kakhulu abalimi ngakubo ekubeni emaningi amathuba kwezolimo.
Kuleli sonto yiNational Wills Week. UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngobungozi bokungabi nencwadi yefa
UMnu uZamani Bhengu, umsunguli we-AmaBhengu Fashion Watch
Ukhiqiza amawashi abesilisa athi yena anemfihlo phakathi. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
ISO elibukhali lokuthi abantu badingani nentshisekelo yokucwaninga ngezinto sekuthele izithelo kusomabhizinisi waseMgungundlovu, KwaZulu-Natali.
UNksz uDudu Msomi, isikhulu esiphezulu nomsunguli weBusara Leadership Partners
Uwumholi okhuliswe ukuhlale ehlwaya ulwazi olusha nokuzilungiselela ocija abaholi bezinkampani. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe
INHLANHLA yinto eyenzeka ngokuthi uma kuqhamuka ithuba likuthole uzilungiselele. Into odinga ukuyenza ukuhlale uzilungiselele ukuze uma liqhamuka ithuba ukwazi ukulisebenzisa.
UMnuz uDuncan Mufamadi, umnikazi weWine by GOAT yaseVenda, eLimpopo
Usethule iwayini elithi yena osenesikhathi eyibambile emabhizinisi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UKUNGAPHOSI ithawula ethwala kanzima ethungatha inkampani ebizomsiza afeze isifiso sakhe sokuba newayini lakhe kumsize ukuthi afeze iphupho lakhe.
KUSUKELA ngenyanga edlule kuqubuke inkulumompikiswano ezweni emva kokuthi iKhomishini yamaLungelo aBantu ithe ukuphoqa abantu ukuthi bagomele iCOVID-19 kuyobe kuwuhlukumeza amalungelo abo. Iqongile le nkulumompikiswano ngeledlule emva kwesimemezelo esenziwe yiDiscovery Holdings. … Read More
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixosa noBusani Mbili, umlingisi wemidlalo yethelevishini. Useke walingisa kwiZabalaza, Isibaya, Isithembiso, i-Generations neGold Diggers. Manje ulingisa indawo kaDkt uNzimande emdlalweni we-e. tv, i-Durban Gen
Umgomo weCOVID-19 ubalulekile kodwa kukhona okufanele kubhekwe
KUMQOKA ukugqugquzela abantu ukuthi bagomele iCOVID-19 ukuze kufinyelelwe esigabeni lapho kuzothathwa ngokuthi sekugome abantu abenele, i-herd immunity.
UNksz uWanita Ngcobo, umsunguli weWanita KaNgcobo, yemisiko yesiNtu nesimanje yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Uqhakambisa isiNtu ngezimpahla azikhiqizela abesifazane. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UKUFUNA ukuba wusizo ebantwini besifazane abathanda ukuhloba bebe bahle ngemisiko yesiNtu ngesinye sezizathu ezenze waqala ibhizinisi lengqephu.
Ezinohlonze Izindaba Kugiya ongoti
NAMI ngifisa ukuphosa esivivaneni ekwemukeleni umengameli omusha weBusiness Unity South Africa (iBUSA) uSolwazi uBonang Mohale nephini lakhe uMnu u-Adrian Gore. Bathatha izintambo ngesikhathi esimqoka. Bangabaholi amava abo aziwayo futhi banaso sonke isipiliyoni sokuthi kudingekani ukuze amabhizinisi asimame futhi asize iNingizimu Afrika ukuthi iphumelele.
UKUCWANINGA nokuqonda kabanzi ngezingqinamba ezibhekana nabalimi nsukuzonke ngezinye zezizathu ezenza waqala ibhizinisi elisiza abalimi.
Ithimba leLokshini Kitchen Braai Shack yaseYeoville, eGoli, eGauteng
BENZA indlala ibe ngabakhwekazi abanikazi bebhizinisi lokudla eliseBellevue East, eGoli. Ngaleli bhizinisi elibude buduze neYeoville, eyake yasesitayeleni, benza impilo ibe lula ebantwini abafuna ukudla kwaselokishin edolobheni.
UNkk uFundi Tshazibana, elinye lamaphini omphathi weBhange loMbuso
Uwumphathi kwezomnotho owenza okungavamile kwabesifazane abamnyama. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe
KUYAMTHOKOZISA ukwenza izinto ezingajwayelekile emkhakheni wozomnotho nokuvelela lapho abantu abaningi bebengeke balindele khona umuntu ofana naye – ongowesifazane omnyama.
I-Transnet SOC Ltd neSpecial Investigating Unit basithakasele isigwebo seSpecial Tribunal lapho iyalele khona isisebenzi sakudala saseTransnet uMnu uHerbert Msagala ukuthi abuyisele uR26.4 million kule nkampani. I-Special Tribunal ithole ukuthi uMsagala wayekhokhelwa yinkampani eyayenzela uTransnet umsebenzi, i-IGS Consulting Engineers (Pty) Ltd, ngenkathi eqashwe eTransnet. Lesi sigwebo siqinisekisa ukuthi izikhulu ezithinteka ekukhwabaniseni ngenkathi zisebenza eTransnet aziphunyuli
I-Transnet Freight Rail ithe ziyaqhubeka nokwanda izigameko zokuntshontswa kwamakhebuli nokucekelwa phansi kojantshi bayo. Ithe emasontweni amabili edlule sekube nezigameko ezingu-152 kanti amakhebuli antshontshiwe awu-40km. Le nkampani ebhekelele izitimela ezithutha impahla ithe loku kuholele ekubambezelekeni kwezinto ngamahora awu-14, nokusho ukubambezeleka kokudiliva izimpahla
UNksz uFezile Mdletshe, umsunguli weFezile Fashion Skills Academy yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Uyadlondlobala kwezemfashini osenezikole ezifundisa ukusika ingqephu emadolobheni amakhulu ezweni. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
NJENGABANYE abathungi, uthando lokuthunga lusuka emuva kunina noninakhulu njengoba aqala ukuthunga eneminyaka eyisishiyagalolunye.
Ngingathi yebo futhi cha. Kwakuncika ekutheni ngangiyidingela ini imali. UMama wayecophelela kakhulu kwezezimali futhi ubehlale esifundisa kusukela sisebancane ukwenza imali ngoba ngaleyo ndlela sasizokwazi ukuphatha kahle lelo (senti) nalelo senti.
UNksz uSbahle Sithole, umsunguli weSMAIS Bricks yaseNewcastle, KwaZulu-Natali
WAKHUTHAZWA wukubona unina enezindlela eziningi zokungenisa imali osenenkampani yakhe yama-blocks. Kanti ukubonga unina oyisibuko kuyena noyise inkampani uyiqambe ngezinhlamvu zokuqala zamagama abazali bakhe.
Okumele ukuqikelele uma usungula ibhizinisi nosondelene nabo, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngithanda sibheke ukuthi yiziphi izinto ezibalulekile okufanele uziqaphele uma ungena ebudlelwaneni bokusebenzisana nomuntu ebhizinisini.
Kuntwela ezansi ngokuvuka komnotho uma sizoyibamba kanje ngohlelo lomgomo, kuloba uBusi Mavuso
SIDINGA ukugxila ekuphokopheleni ukugoma abantu abadala abawu-70% kuya ku-80% ezweni. Emazweni osekwenzekile loku, isibalo sabantu abalaliswa esibhedlela nabafayo sehlile kakhulu ngisho nangeziqubu lapho ukutheleleka kwabantu bekunyuka khona.